नेताका बोली - Sabaiko Sandes
नेता बोलीरहेकै हुन्छन् मानौं उनीहरु कामभन्दा बोल्नु आफ्नो जिम्मेवारी भएको ठान्छन् । आफ्ना सिद्धान्त पार्टीका कार्यकर्तालाई पिलाइरहेकै हुन्छन् । यो देश परिवर्तनको एउटा आवश्यकीय तत्व पनि होला तर यसबाट आफैपनि कार्यकर्ता दिक्क होलान् ! जनता दिक्क हैन आजित नै भैसके ।
Sabaiko Sandes २०७८, १ मंसिर बुधबार ०७:०८
कोही धेरै व्यक्ति बोल्छ भने त्यो राजनीति गर्ने मान्छे ! अपवाद यहाँ पनि स्वीकार्य छ । यसको पाटो छुट्टै भयो । नेपालको सन्दर्भ कोट्याएर हेर्दा नेताजी नै बढी बोलिरहेका हुन्छन् । जनता उनका भाषणरुपी बोली चुपचाप श्रवण गर्न विवश छन् विगत लामो समयदेखि ।
प्रश्न उठ्ला जनताले किन नेताका बोली सुन्ने भनेर? तर यो प्रश्नका लागि प्रश्न मात्रै हो । हरेक रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा पत्रपत्रिकामा यीनै कुरा प्राथमिकतामा पर्छन् त्यसैले त नेताका बोली जनतालाई नसुनी धरै छैन ।
नेता बोलीरहेकै हुन्छन् मानौं उनीहरु कामभन्दा बोल्नु आफ्नो जिम्मेवारी भएको ठान्छन् । आफ्ना सिद्धान्त पार्टीका कार्यकर्तालाई पिलाइरहेकै हुन्छन् । यो देश परिवर्तनको एउटा आवश्यकीय तत्व पनि होला तर यसबाट आफैपनि कार्यकर्ता दिक्क छन् ! जनता दिक्क हैन आजित नै भैसके ।
नेपालका अधिकांश पार्टीमा धेरै चर्को बोल्नेले राजनीतिमा मौका पाइरहेको देखिन्छ । उसको उपल्लो पद आर्जन गर्ने समय पनि बोलीसँगै छोटिन्छ । उसले लाभको पद चाँडै पाउँन्छ । यो एक तितो उदाहरण नेपालको लागि परिचित भैसकेको देखिन्छ ।
देशका जनताको सेवाको लागि राजनीति गर्ने नेताजी आवश्यक मात्रै बोल्ने गरी काम गर्े देशको समृद्धि नजिकै भेटिएला की !
अर्घाखाँचीमा थप ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
२०७८, १२ कार्तिक शुक्रबार १४:०६
कुलमान घिसिङलाई काम गर्ने बाटो खूल्यो,सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
२०७८, ५ आश्विन मंगलवार १०:३०
२०७७, ८ भाद्र सोमबार ०९:१२